Izakhamizi zase-Richards Bay ziyagula ngokuphuza udizili emanzini | Scrolla Izindaba
Izakhamizi zase-Richards Bay ziyagula ngokuphuza udizili emanzini
“Lokhu akwamukelekile. Abantu abaningi, kuhlanganise nomshana wami, bagulile ngoMgqibelo.”
UHlongwane uthe uMasipala waseMhlathuze kufanele udonse abaphathi be-Cubhu Water Works phezu kwamalahle.
“Abantu bacishe bafa. Labo abanesibopho kumele bajeziswe.”
Uthe kungukwephula ilungelo loMthethosisekelo lokuthola amanzi ahlanzekile.
Okhulumela uMasipala uMdu Ncalane uthe: “IDolobha laseMhlathuze lisebenza kanzima ukuqinisekisa ukuthi izakhamizi zase-eSikhaleni Cluster zinamanzi ahlanzekile kulandela ukungcoliswa kwamanzi avela e-Cubhu Water Works ngeminonjana kadizili ngomhla wokuqala kuMasingana.”
Uthe izakhamizi akumele zisebenzise amanzi kuze kube wukuthi sekukhishwe udizili. Uthe balindele ukuthi amanzi abe esejwayelekile ngoLwesihlanu.
“IDolobha selikhiphe umyalelo wokuthi kube nophenyo oluzoqinisekisa ukuthola izigebengu ezigqekeze lolu cingo zizama ukweba udizili osetshenziswa ngabakhiqizi bethu abasha ukupompa amanzi uma ugesi uphela,” kusho uNcalane.